သောမတ် အယ်လ်ဗာ အက်ဒီဆင်သည် အမေရိကန် တီထွင်သူ၊ သိပ္ပံပညာရှင်နှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ သောမတ် အက်ဒီဆင်အား ၁၈၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ် မီလန်၌ မွေးဖွားသည်။ အက်ဒီဆင်ကို ငယ်စဉ်၌ စာသင်ကျောင်းသို့ပို့ရာ အဆင်မပြေလှသဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူက သူ့ကို နေအိမ်မှာပင် စာသင်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ သူဖတ်ဖို့ စာအုပ်အများအပြားကို သူ၏ မိခင်က ရှာဖွေပေးခဲ့သည်။
အက်ဒီဆင်သည် သိလိုမြင်လိုစိတ် ပြင်းပြသည့် ကလေးသူငယ် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ အမြဲလိုပင် အရာဝတ္ထုများ မည်သို့ဖြစ်တည် ပြောင်းလဲ လှုပ်ရှားနေသည်ကို သူသိချင်နေသည်။ သူ့မိခင်က နေအိမ်၌ လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းတစ်ခု ထူထောင်ပေးထားသည်။ သူ့လက်တွေ့ခန်းထဲတွင် သူတီထွင်ထားသည့် အရာများ အတော်များများကို တွေ့ရှိရသည်။
အက်ဒီဆင်၏ လူသိအများဆုံး တီထွင်မှုမှာ လျှပ်စစ်မီးလုံးပင် ဖြစ်သည်။ ထိုခေတ် ထိုအခါက နေအိမ်များ၌ ဓာတ်ငွေ့ သို့မဟုတ် ရေနံဆီမီးအိမ်များ သုံးစွဲနေချိန်ဖြစ်သည်။ ဈေးသက်သာသော လျှပ်စစ်မီးကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အလင်းရောင်ရရှိရေး သူအကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားခဲ့သည်။ ဇွဲဖြင့် တီထွင်ခြင်းကြောင့် မျက်မှောက်ခေတ်တွင် လျှပ်စစ်မီးခလုတ် ဖွင့်လိုက်ရုံမျှဖြင့် အချိန်မရွေး လျှပ်စစ်မီး အလင်းရောင် ရရှိလာခြင်း ဖြစ်သည်။
တီထွင်အောင်မြင်မှုဟူသည် ၁ % သော ဉာဏ်ကွန့်မြူးမှုနှင့် ၉၉ % သော ချွေးထွက်မှုတို့၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်ဟု အက်ဒီဆင်က ဆိုသည်။ လူသားအကျိုးပြု လုပ်ငန်းများကို တီထွင်သူ သောမတ် အက်ဒီဆင်သည် အသက် ၈၄ နှစ်အရွယ်တွင် နယူးဂျာစီပြည်နယ် ဝက်စ်အေရိန့်၌ ၁၉၃၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့က ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
သောမတ်စ်အယ်လ်ဗာအက်ဒီဆင် ကို ၁၈၄၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် အမရိကန်ပြည်ထောင်စု ၊ အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ် ၊ မီလန်မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ အက်ဒီဆင်သည် ဆမ်မြုရယ်အက်ဒီဆင်ဂျုနီယာ နှင့် နန်စီအီလိယက်အက်ဒီဆင် တို့၏သတ္တမမြောက်ရင်သွေးဖြစ်ပြီး မောင်နှမမျာအနက် အငယ်ဆုံးလည်းဖြစ်သည်။
သူ၏မိဘများမှာ လူလတ်တန်းစား ပညာတတ်များဖြစ်ကြသည်။ အက်ဒီဆင် ရ နှစ်သားအရွယ်ရောက်သော် ဖခင်မှာ Fort Gratiot စစ်တပ်စာတိုက်တွင် သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသောကြောင့် မိသားစုတစ်ခုလုံး မစ်ရှီဂန်ပြည်နယ် ၊ ဟူရွန်ဆိပ်ကမ်း Port Huron သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရလေသည်။
Port Huron တွင်အက်ဒီဆင် ကျောင်းစတက်ခဲ့သည်။ စာသင်ခန်းထဲတွင် အရွယ်အမျိုးမျိုးသော ကျောင်းသား ၃၈ ယောက်နှင့်အတူ ပညာသင်ကြားရလေသည်။ သူ၏ ဆရာ ၊ ဆရာမများက အက်ဒီဆင်အား ဉာဏ်အထိုင်းဆုံးကျောင်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။
အိမ်တွင် စာအုပ် ၊ စာပေများစွာကို ဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့သည်။ အက်ဒီဆင်သည် စာကိုအသာငမ်းငမ်းဖတ်တတ်သူဖြစ်လေသည်။ သူ၏မိခင်က ကျမ်းစာသင်ပေးခဲ့သလို ဖခင်ဖြစ်သူက ဂန္ဓဝင်စာပေများကို ဖတ်ရှုရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ အားပေးအားမြှောက်ပြုသည့်အနေဖြင့် စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်ပြီးသွားတိုင်း အက်ဒီဆင်အား ၁ဝ ပြား ဆုချလေသည်။
မကြာမီမှာပင် အက်ဒီဆင်ဆိုသော ကလေးငယ်သည် ကမ္ဘာ့သမိုင်းကို အထူး စိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီး ရှိတ်စပီးယားပြဇာတ်များကို အထူး နှစ်ခြိုက်ခဲ့လေသည်။ ကဗျာများကို ပြန်လည်ရွတ်ဆိုခြင်းနှင့် စာဖတ်ခြင်းသည် သူ၏ အနှစ်သက်ဆုံးအရာများဖြစ်ခဲ့သည်။ အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်တွင် Gibbon's Rise And Fall Of The Roman Empire, Sears' History Of The World, and Burton's Anatomy Of Melancholy, The World Dictionary of Science , ESifh Practical Chemistry စာအုပ်တို့ကိုဖတ်ရှုလေ့လာပြီးဖြစ်နေလေသည်။ သူသည် နယူတန်၏ရူပဗေဒနိယာမများ ၊ သင်္ချာနှင့် ဓါတုဗေဒ ဘာသာရပ်များကိုလည်း အထူးစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။
သူသည် Grand Trunk Railway ဘူတာရုံ၌ သတင်းစာများ၊ သကြားလုံး နှင့်မုန့်များရောင်းခြင်း အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်ကသူ၏အသက်မှာ ၁၂ နှစ်သာ ရှိသေးသည်။ နေအိမ်မြေအောက်ခန်းထဲတွင် ဓါတုဗေဒဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုပြုလုပ်ကာ စမ်းသပ်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကြေးနန်းရိုက်နည်းပညာတတ်မြောက်ပြီး နောက်၁၈၆၂ မှ ၁၈၆၈ အတွင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အနောက်အလယ်ပိုင်း ၊ တောင်ပိုင်း ၊ ကနေဒါ နိုင်ငံတို့ နှင့် နယူးအင်္ဂလန် နိုင်ငံများသို့ ကြေးနန်းရိုက်သူအဖြစ် လှည့်လည်ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ထိုအချိန်အတောအတွင်း အက်ဒီဆင်သည် သတင်းပို့သောစာသားများကို အလိုအလျောက် ရိုက်နှိပ်ပေးသည့် ကြေးနန်းရိုက်ကိရိယာကို တီထွင်ခဲ့လေသည်။ ၁၈၆၉ တွင် သူ၏တီထွင်မှုဖြစ်သော ကြေးနန်းရိုက်ခြင်းနှင့် စာသားများကိုပုံနှိပ်ပေးခြင်း နှစ်မျိုးစလုံး အသုံးပြုနိုင်သော စက်ကိရိယာမှာ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာပြီး အမြောက်အများ တီထွင်ထုတ်လုပ်လာရသောကြောင့် အက်ဒီဆင်သည် အလုပ်မှထွက်ကာ စီးပွားဖြစ် တီထွင်ခြင်း ကိုအချိန်ပြည့်လုပ်ကိုင်ခဲ့လေသည်။
၁၈၇၅တွင်အက်ဒီဆင်သည် စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းကို စတင် ရင်ဆိုင်စ ပြုလာရပြီး ဓာတ်ခွဲခန်းအသစ်တစ်ခု နှင့် စက်ပစ္စည်းအလုပ်ရုံတစ်ခု တည်ဆောက်ပေးရန် သူ၏ဖခင်အား အကူအညီတောင်းခံခဲ့သည်။ ၁၈၇၆ ခုနှစ် မတ်လတွင် အလုပ်ရုံအသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး သူ၏လုပ်ငန်းစပ်တူရှယ်ယာများဖြစ်သော Charles Batchelor နှင် John Kruesi တို့နှင့်အတူ အလုပ်လုပ်ခဲ့လေသည်။ထို ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်အက်ဒီဆင်သည်အကြီးမားဆုံးသောအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ပြီး Wizard of Menlo Park ဟူသော ဘွဲ့ထူး ၊ ဂုဏ်ထူးကို ချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
၁၈၇၇ တွင်အက်ဒီဆင်သည် တယ်လီဖုန်းစကားပြောခွက် နှင့်စပီကာ တို့တွင် ယခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်အောင် အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သော carbon-button transmitter ကိုတီထွင်ခဲ့လေသည်။
ထိုဓာတ်ခွဲခန်းအလုပ်ရုံတွင် အလုပ်သမားအယောက် ၆ဝ-ခန့် ခန့်ထားပြီး ထိုများပြားလှသောအလုပ်သမားများကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရသည်။ အလုပ်သမားအသစ်တစ်ဦးက အက်ဒီဆင်အားအလုပ်ရုံစည်းမျဉ်း ၊ စည်းကမ်းများကိုမေးသောအခါ “ဒီနေရာမှာ ဘာစည်းမျဉ်း ၊ စည်းကမ်းမှမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့တတွေအားလုံး တစ်စုံတစ်ခုကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်အောင် ပြုလုပ်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်” ဟု အက်ဒီဆင်ကပြန်ဖြေခဲ့လေသည်။
West Orange တွင်နေထိုင်စဉ်အတွင်း အက်ဒီဆင်သည် စီးပွားရေးဈေးကွက်အတွက် ဓာတ်စက်များ ၊ Kinetoscope , batteries, electric pen, mimeograph , microtasimeter တို့ကို စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့လေသည်။ ၁၉၁၃ တွင် အက်ဒီဆင်သည် ပထမဦးဆုံး အသံထွက်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၁၅ တွင် US Navy Consulting Board ၏ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်ရာထူးခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။ အက်ဒီဆင်သည် တီထွင်မှုပေါင်း၁၀၀ဝကျော်ကို မူပိုင်ခွင့် ရခဲ့လေသည်။ အက်ဒီဆင်၏တီထွင်မှုများသည် လိုအပ်ချက်အရ နည်းပညာအသစ်များဖြင့် တီထွင်မှုများဖြစ်သကဲ့သို့ ရှာဖွေစမ်းသပ်ရင်း မတော်တဆတွေ့ရှိမိသော တီထွင်မှုများလည်း ပါဝင်ပေသည်။
သောမတ်စ်အယ်လ်ဗာအက်ဒီဆင်သည် နယူးဂျာစီ ပြည်နယ် West Orange ၌ ၁၉၃၁ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ရုပ်အလောင်းအား သူ့၏အိမ်နောက်ဖေး၌ မြုပ်နှံခဲ့သည်။ အက်ဒီဆင်၏တီထွင်မှုများသည် ယနေ့ခေတ်မျက်မှောက်ကာလ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အလွန်အကျိုးကျေးဇူးများလှပေသည်။
↑ Benoit, Tod (2003). Where are they buried? How did they die?. Black Dog & Leventhal, 560. ISBN 978-1-57912-678-0။